बुढानीलकण्ठ ‘दरबार’ मा शक्तिकेन्द्रहरूकाे दाैडधुप | रक्त न्युज
काठमाडौँ- चुनाव संघारमै थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नतिजा आफ्नै पोल्टामा पर्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका थिए। तर चुनावी प्रचार–प्रसारलाई तीव्र बनाएका तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ साल कार्तिक २९ गते देउवालाई कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरे, गोरखा पुगेर।
देउवाले त्यसको भोलिपल्ट कात्तिक ३० गते धनगढी पुगेर ओलीलाई जवाफ फर्काए– मलाई ज्योतिषले सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेका छन्। कसरी अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्छु?
तर चुनावी नतिजा देउवाको अपेक्षाभन्दा फरक आयो। कांग्रेस लज्जास्पद हार ब्यहोर्न बाध्य भयो। प्रतिपक्षमा खुम्चिएका देउवाले प्रतिपक्षको दायित्व इमान्दारिताका साथ पूरा नगरेको आरोप, आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट खेपे।
गुटउपगुटको धमिरा लागेको आफ्नो पार्टीलाई जोगाउन छोडेर सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप पनि निरन्तर लाग्यो उनलाई।
तर परिस्थिति एकाएक बदलिएको छ। अक्सर आफ्नै पार्टीका नेताहरुको आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका र उनीहरुसँगको भेटलाई पन्छाउँदै आएका देउवा पुनः भीडले घेरिन थालेका छन्। उनको बुढानिलकण्ठ दरबार पुनः एक पटक शक्ति केन्द्रको रुपमा विकसित हुन थालेको छ। र, उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषको भविष्यवाणी मिल्ने संकेत देखिएका बेला ओलीको शक्तिकेन्द्र बालुवाटार सुनसान बन्दैछ।
स्वास्थ्य र सुरक्षाको बहानामा ओलीले सिंहदरबारमा हुने सरकारी कामकारवाही र धुम्बाराहीमा हुने बैठकहरु बालुवाटारमा सारिरहे। चौतर्फी सुरक्षाको घेराभित्र बसेर उनले विवादस्पद कामलाई पनि उत्तिकै निरन्तरता दिए। आफ्ना पार्टीका नेताहरुबाट एकलौटी काम गरेको भन्दै आलोचित बनिरहे।
वास्तवमा ओलीले कूटनीतिक निकायदेखि विदेशी जासुसी संस्थाका प्रमुखसँगको भेटको थलो बनाएका थिए बालुवाटारलाई। तर हाल आएर उनका गुटका केही नेताहरुको जमघट र मन्त्रिपरिषद् बैठकलगायत सरकारी औपचारिक बैठकको थलोमा सीमित हुन पुगेको छ बालुवाटार।
नेकपाको अन्तरकलह साम्य भएको भए बुढानिलकण्ठ यति छिट्टै पुनः शक्तिकेन्द्रको रुपमा उदाउने थिएन होला। पार्टीको अन्तरकलह व्यवस्थापनको सट्टा मैमत्त ओलीले विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताइदियो। त्यसपछि राजनीतिक सूर्य बुढानिलकण्ठतिर उदाउन थालेको अड्कलबाजी बढ्न थाल्यो।
सर्वोच्चबाट संसद पुनःस्थापनाको फैसला आउँदा नेकपाका अर्का खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल विरोधसभाका लागि चितवनमा थिए। सर्वोच्चको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ प्रचण्ड र नेपालले सबैभन्दा पहिले देउवालाई टेलिफोन गरे। बधाई दिए। बहाना बधाईको भएपनि त्यसको अन्तर्य सत्ता नेतृत्व बुझाइहाल्ने नभएर सहकार्यको आग्रह नै थियो।
देउवासँग भेट्न प्रचण्ड र माधव नेपाल यति हतारोमा थिए कि उनीहरु सर्वोच्चको फैसलापछि चितवनमा पूर्वनिर्धारित विजय जुलुसलाई सम्बोधन नगरी भोलिपल्टै फागुन १२ गते सबेरै काठमाडौँ आए। बुढानिलकण्ठ पहिलो गन्तव्य बन्यो उनीहरुको।
बुढानिलकण्ठ स्रोतका अनुसार २० मिनेटको भेटमा प्रचण्ड र माधवको देउवालाई पुरानै आग्रह थियो–सत्ताको सहकार्य गरौँ। तपाईंको चाहना अनुसार क्याविनेट बनाऔँला।
देउवाले आफ्ना साथीहरुसँग सल्लाह गर्ने जवाफ दिएर प्रचण्ड र माधवलाई फर्काएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट फागुन १३ गते साँझसम्म बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्यो। सत्ताकै वरिपरि घुमेको बैठकले नेकपा कानुनी रुपमा दुई चिरा नभएसम्म सत्तासमिकरणबारे धारणा नबनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
सत्ताले दैलो ढकढकाउँदा देउवाले तत्काल निर्णय दिएनन् र थप समय किन मागे? राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवालाई थाहा छ, अहिले नेकपाका दुवै खेमाका नेताहरुलाई उनको आवश्यकता छ, निकै हदसम्म विकल्पहीन रुपमा। आउँदा दिनमा बुढानिलकण्ठमा भीड अझै बढ्नेमा उनी आश्वस्त छन्।
त्यसैले देउवाले प्रचण्ड–माधव खेमासँगै ओलीसँग पनि आन्तरिक छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सरकार निर्माण गर्नुभन्दा पनि एकअर्कालाई निषेध गर्न उद्यत यी दुवै खेमाका लागि देउवा निर्णायक देखिनु स्वाभाविक हो।
संसदको विद्यमान संख्याका हिसाबले सरकार बन्न १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग सांसदको संख्या हाल ६३ जना सांसद भएकोमा दुईजना निलम्बित भएका कारण ६१ जनाले मात्रै मत हाल्न सक्छन्। सभामुखसहित १७३ सांसद रहेको नेकपामा १७१ जनाले मात्रै मत दिन सक्छन्। सभामुख मदतानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् भने एक जना सांसद सानु सिवको निधन भइसकेको छ।
जसमा ‌ओलीतिर हाल ८४ जना छन् भने प्रचण्ड–माधवतिर ८७ सांसद छन्। ओलीले आफ्ना सांसद टिकाइरहेको अवस्थामा सत्ता सहकार्य गर्न सक्छन्। ओली र देउवाका सांसद जोड्दा सांसद संख्या १४५ पुग्छ।
संसद पुनःस्थापनासँगै ओली पक्षका केही सांसदहरु प्रचण्ड–माधव खेमामा जाने आँकलन गरिएको छ। तर साम, दाम र दण्डभेदबाट आफूतिर सांसद अभियान सुरु गरिसकेको आरोप छ। शेरबहादुर तामाङ र माया ज्ञवाली त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा लिइएको छ।
तर नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रचण्ड–माधवको दौड ओलीको भन्दा तीव्र देखिन्छ। संसद पुनःस्थापित भएको खुसीयालीमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाएका प्रचण्ड–माधवले देउवालाई फकाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने देखिन्न। हाल ८७ जना सांसद रहेको प्रचण्ड–माधव खेमाले पनि सहकार्य गरेमा सजिलै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने हैसियत राख्छ।
ओलीलाई शासकको रुपमा मात्रै होइन पार्टीबाटै हटाएर कारवाही गर्ने रणनीतिमा उनीहरु देखिएका छन्। उनीहरुले पार्टी एकता अघि बढाउन पनि ओलीको राजीनालाई पूर्वशर्त बनाएका छन्। दुवै खेमाका दोस्रो तहका नेताहरु खासगरी प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्माहरु पार्टी बचाउने विकल्पबारे छलफलमा जुटेका छन्। तटस्थ बसेका नेकपा उपाध्याक्ष वामदेव गौतम पार्टी एकताको प्रस्तावसहित दिन बिराएर खुमलटार र बालुवाटार धाउन थालेका छन्। बिहीबार प्रचण्डसँग एकताको प्रस्ताव गर्न पुगेका गौतम शुक्रबार ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे।
यता ओलीले आफ्नो राजीनामा र आगामी कदमबारे आन्तरिकसँगै कांग्रेसलगायत अन्य दलहरुसँग छलफल तीव्र पारेका छन्। ओली खेमाका प्रवक्ता ज्ञवालीले विकल्पहरु खुल्ला राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दलहरुसँग छलफल गरिरहेको बताए।
उनले भने,‘ एकताको स्पष्ट दिशा हुँदा विकल्पहरु त्यसैगरी खुल्ला हुनेछ। पार्टी एकता जोगियोस् भन्ने सबैको चाहना छ।’
छलफलको मुख्य केन्द्रमा भने फेरि पनि देउवा नै परेका छन्।
तर ओली प्रतिस्पर्धी खेमासँग भिडन्तमा ओर्लिएका छन्। शुक्रबार मात्रै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाई उनको ठाउँमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेर त्यसको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
विदेशीको चासोमा पनि देउवा
विदेशीको चासोमा पनि देउवा पर्न थालेका छन्। देउवालाई भेट्न बिहीबार साँझ छिमेकी मुलुक चीन र भारतका राजदूतहरु बुढानिलकण्ठ पुगे।
नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका चीन र भारतका कुटनीतिज्ञको यो दौड अस्वाभाविक हैन। चीन अझै पनि नेकपाको एकता चाहन्छ। नेता गौतमद्वारा ओलीको राजीनामा माग र एकाएक पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको सक्रियतालाई एकता प्रयासकै सेरोफेरोमा हेरिएको छ।
तर भारत र चीनको यो प्रयास विपरित नेकपा दुई चिरामै रहँदा नै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने मान्यता राख्नु अस्वाभाविक होइन। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपालमा पछिल्लो पटक उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर भेटघाट तीव्र पार्नुलाई त्यही रुपमा हेरिएको छ।
भावी प्रधानमन्त्रीका पात्रका रुपमा चर्चामा आएका देउवासँग चिनियाँ राजदूत होउले भेट्नु र उता ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह दोहोरिनुले चीन वैकल्पिक मित्रहरुसँग सहकार्यमा व्यस्त रहेकोसमेत संकेत दिएको छ।
महाधिवेशनबाट आफूलाई फेर्न आफ्ना नेताहरु लागिरेहका बेला देउवा पुनः शक्ति केन्द्रको महत्वपूर्ण पात्र बनेका हुन्। अर्थात आगामी दिनमा बुढानिलकण्ठमा कांग्रेसी जमात मात्र हैन, प्रतिस्पर्धी वाम समूह र अन्य दलहरुको पनि घुइँचो रहेनछ।-दिपा दाहाल
अघिल्लो लेखमाफागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस
अर्को लेखमाकोरोना संक्रमणबाट एकै दिन ९ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाए